दिनभर हाइ आएर हैरान हुनुहुन्छ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
दिनभर हाइ आएर हैरान हुनुहुन्छ?
किन अल्छि लाग्छ त?
निन्द्रा शरीरको आवश्यकता हो। राती राम्रोसंग निन्द्रा परेको छैन भने दिउँसो शरीरमा आलस्यता आउँछ। राती सुत्ने समय मोबाइल चलाउने नगर्नुस्। यसले तपाइको निन्द्राको गुणस्तर घटाउँछ, अर्थात शरीरले पर्याप्त आराम पाउँदैन अनि भोलीपल्ट थकित महसुस हुन्छ।
तर राम्रोसंग सुत्नुभएको छ भने पनि पट्यार लाग्ने, वा आलस्यता आउँछ, किन?
आलस्यसंग जुझ्ने केही उपाय छन्।
१. काममा फोकस गर्न सक्नुहुन्न, हाइ मात्र आइरहन्छ भने छोटो पावर न्याप लिनुस्। अर्थात केही मिनेटको लागि सुत्नुस्। १५-२० मिनेट टेबलमै टाउको अड्याएर सुत्नु भए हुन्छ। उठेपछि तपाइले फ्रेस अनुभव गर्नुहुनेछ।
२. स्वास्थ्यको लागि कफि पटक्कै राम्रो होइन। तर निन्द्रा र आलस्यतासंग झुझ्ने कारकार उपाय भने हो। निन्द्राले हैरान गरेको छ भने तातो कफि पिइदिनुस् तत्कालै राहत दिन्छ।
४. दिनमा कति पानी पिउनुहुन्छ। यदी तपाइको पिसाबको रंग पहेँलो वा त्यो भन्दा पनि गाढा छ भने शरीरमा पानीको कमी भएको छ। प्रशस्त पानी पिउनुस। पिसाबको रंग सफा वा हल्का पहेँलो छ भने शरीरमा पानी पर्याप्त भएको बुझिन्छ। पानीले शरीरमा ताजापन र स्फूर्ति कायम राख्छ।
Previousहेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दैगर्दा मृत बच्चा जन्मियो
Nextअभिभावकको घरमा गएर सुन चोर्ने प्रधानाध्यापक पक्राउ